छालामा निलो दाग ! बोक्सीको टोकाइको भ्रम त पाल्नु भएको छैन ? होस गर्नुस
वि.सं १२ श्रावण २०७६, आईतवार ०५:५०
हाम्रो शरीरको विभिन्न ठाउमा कहिले कहिँ अचानक रगत जमेको जस्तो निलो दागहरु देखिने गर्छ । यस्तो छालामा निलो दाग न चोटपटक न कुनै बाहिरी कारणले नै हुने गर्छ ।
राती केहि चाल नपाई गहिरो निन्द्रामा सुतेको वा धेरै सुतेको व्यक्तिको शरीरमा यस्तो दाग अचानक देखिन सकिन्छ, बिस्तारै प्याजी र गहिरो रङ भएर जान्छ र केहि दिनमा आफै निको हुन्छ । शरीरमा अचानक यसप्रकारको निलो दाग देखिएमा, बोक्सीले टोकेको एउटा अन्धविश्वास समेत रहेको देखिन्छ ।
छालको कुनै भागमा चोट लाग्दा वा कतै ठोक्किदा रक्त नलिमा क्षति पुग्न गइ ठोकिएको भागमा निलो दाग देखिने गर्छ । चोट लाग्दा वा अन्जानमा ठोकिदा उक्त ठाउँमा रगत जम्ने गर्छ र यस्तो निलो दाग बस्न जान्छ । तर, कहिले काही विना चोटपटक पनि हाम्रो शरीरमा यस्तो दाग हुने गर्छ ।
बंशाणुगत कारणले पनि छालामा निलो दाग देखिन सक्छ । हाम्रो शरीरमा रगत उत्पादन गर्ने क्षमतालाई कमजोर भएको खण्डमा पनि शरिरमा निलो दाग देखिन सक्छ ।
हाम्रो शरीरमा प्रोटीनको तुलनामा रगतको कमी भएमा सानो चोट-पटक तथा ठोकिएपछि अत्याधिक रगत बग्ने गर्छ र यस्तो समस्याबाट पीडित व्यक्तिलाई सानो मात्र चोट लाग्दा पनि ठूल्ठूला निला दाग हुने गर्छ । रगत पातलो बनाउने औषधीको तथा माछाको तेल, धेरै लसुनको सेवन तथा विभिन्न खानेकुराको प्रयोग गर्दा हाम्रो रगतलाई जम्नबाट रोक्ने काम गर्छ र हाम्रो शरीरमा यस्तो समस्याहरु देखा पर्न सक्छ ।
पुरातन समाजमा एउटा अन्धविश्वास छ, छालामा निलो दाग देखिए, बोक्सीले टोकेको भनिन्छ ।
यस्तो दाग अनायसै देखापर्छ । कुनै बाहिरी कारण हुँदैन । न चोटपटक हुन्छ, न अरु केही । राती सग्लो सुतेको व्यक्तिको शरीरमा अचानक दाग देखिन्छ । खासमा के हो यो दाग ? के यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ ?
किन बस्छ छालामा निलो दाग ?
छालको कुनै भागमा चोट लाग्दा रक्त नलिमा क्षति पुग्न जान्छ । जसको कारण छालामा निलो दाग देखिने गर्छ । यस्तो चोटपटकले सम्बन्धित ठाउँमा रगत पनि जम्ने गर्छ । र, आसपासको कोशिकामा फैलिएर जान्छ ।
चोट लाग्दा शरीरले देखाउने एक प्रकारको प्रतिक्रिया हो यो । मेडिकल भाषामा यसलाई ‘कन्टूशन’ अर्थात भित्री चोट भनिने गरिन्छ । तर, विना चोटपटक पनि यस्तो दाग हुन सक्छ ।
– भिटामिन ‘के’ले रगत जमाउने काममा भूमिका खेल्छ । जसको कमीले पनि रगत जम्ने प्रक्रिया प्रभावित पर्नइ जान्छ र छालामा निलो दाग देखिन सक्छ ।
तुलसीको पात काे प्रयाेगले लिन सकिन्छ यस्ताे स्वास्थ्य लाभ,यसरी प्रयाेग गर्नुहाेस् :
छिटो-छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ! यी हुन केहि घरेलु उपायेहरु
प्राणवायु अक्सीजनको कमीले यस्ता रोगहरू निम्त्याउन सक्छ।
वन विलीब्रान्ड डिजीज एक यस्तो समस्या हो जसको कारण अत्याधिक रक्तश्राव हुने गर्छ । वान विलीब्राण्ड नामक प्रोटीनको तुलनामा रगतको कमी भएमा यस्तो समस्या हुने गर्छ । यो रोग लागेमा चोट-पटकपछि अत्याधिक रगत बग्ने गर्छ । यस्तो समस्याबाट पीडित व्यक्तिलाई सानो मात्र चोट लाग्दा पनि ठूल्ठूला निला दाग देखिने गर्छन् ।
किमोथेरापीको अवस्थामा ब्लड प्लेटलेट्स ४ लाख भन्दा तल अउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा शरिरमा पटक-पटक निलो दाग देखिने गर्छ । निलो दागलाई हेलचक्राई गर्नु हुँदैन । यस्तो दाग क्यान्सरको संकेतसमेत हुन सक्छ ।
ब्लीडिग डिसअर्डरको कारण पनि यस्तो समस्या हुन सक्छ । थ्रोन्बोटिक थ्रोन्बोसाइटोपेनिया पप्र्यूरा (टीटीपी) वा आइडियोपेथिक थ्रोन्बोसाइटोपेनिक पप्यूरा -आइटीपी) भएमा प्लेटलेट्स कम हुने गर्छ । यसले शरिरको रगत उत्पादन गर्ने क्षमतालाई पनि कमजोर बनाउने काम गर्छ । जसले गर्दा पनि शरिरमा निलो दाग देखिन सक्छ ।
कुनै कुनै औषधी र सप्लीमेन्ट प्रयोगको कारण पनि छालामा निलो दाग देखिने गर्छ । एस्पिरिन जस्ता रगत पातलो बनाउने औषधीको प्रयोग गर्दा कतिपयलाई यस्तो समस्या हुन्छ । किनकी यस्तो औषधीले रगतलाई जम्नबाट रोक्ने काम गर्छ । यसका साथै प्राकृतिक सप्लीमेन्ट जस्तो की जिन्को विलोवा, माछाको तेल, लसुनको बढी प्रयोगले पनि रगत पातलो बनाउँछ ।
निन्द्रामा झस्किने गर्नुभएको छ? यस्तो रहेछ कारण !
टाउको दुख्ने गर्छ ? तुरुन्त आराम लिन यी ६ उपाय अपनाउनुहोस् !
तपाई बिरामी त हुनुहुन्न ? जिब्रोमा चम्चा राखेर १ मिनेटमैं पत्ता लगाउनुस् !
अनि प्याजी र गहिरो रङ भएर जान्छ । र, विस्तारै निको हुन्छ । यसरी बढी उमेरका मानिसमा दाग देखिने मुख्य कारण भनेको रक्तनलीमा लामो समयदेखि लगातार परेको सूर्यको किरण हो । यस्तो किरणले रक्तनलीलाई कमजोर बनाउँछ ।
यी खाद्यपदार्थ, जसलाई कहिल्यै फ्रिजमा नराख्नू !
छालामा निलो दाग
आईसीसी टी–२० विश्वकप एसिया छनोट: नेपालद्वारा कुवेत ७ विकेटले पराजित
१३औँ साग मा प्याराग्लाइडिङ का लागि उडान र अवतरण गरिने उपयुक्त स्थलको खोजी